संगीतमा नाम र दाम दुवै छ
थानेश्वर गौतम, नेपाली गीत संगीतको क्षेत्रमा कुनै नयाँ नाम होइन । विगत ०५६÷०५७ सालदेखि नै संगीतको क्षेत्रमा अनवरत रुपमा लागेका गौतम अहिले चर्चित कलाकारको रुपमा गनिन्छन् । बाग्लुङ गल्कोटलाई जन्मभूमि बनाएका गौतमले काठमाडौँलाई कर्मभूमि बनाउँदै गीत संगीतको क्षेत्रमा गज्जबले जमेका छन् । गौतमले हालसम्म सालैज्यू, गजल, रोहिला जस्ता गीतको रचना गरी संगीत पनि भरेका छन् । कर्ममा विश्वास राख्ने गौतमका झण्डै ७÷८ वटा गीति एल्बम बजारमा आइसकेका छन् । उनले रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसबाट संगीत विषयमा मास्टर सकेका छन् । गीतसंगीतको क्षेत्र नामको लागि मात्र हो ? दामबिनाको नामले मात्रै यो क्षेत्रमा टिकिरहन सकिएला ? के के छन् गीत संगीतको क्षेत्रका अफ्ठ्यारा र सफ्ठ्यारा पक्षहरु ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर गौतमसँग संसारन्युज डटकमले गरेको कुराकानी:
तपाई सांगीतिक क्षेत्रमा लागेर सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
म एकदमै सन्तुष्ट छु । संगीत विषय एक त मेरो अभिरुचीको विषय, अर्काे म आफैँले पूजा गरेको विषय पनि हो । आफ्नो रुची भएको विषयमा पनि सन्तुष्ट हुन सकिएन भने अरु विषयमा त झन कसरी सन्तुष्ट हुने ? त्यसैले म संगीतको क्षेत्रमा सन्तुष्ट नै छु ।
तपाईंका कुन कुन गीति एल्बम बजारमा छन्?
सोधौँ कसलाई भन्ने शीर्षकको लोकगीतबाट सुरु भएको हो, मेरा सांगीतिक यात्रा । त्यसपछि मैले कान्छी सोल्टिनी, नाकमा फूली ए मेरो ठूली(सालैज्यू), ख्याल ख्यालैमा गहिरो माया(आधुनिक गीति संग्रह), आमा,(आमाको सम्झनामा), कृष्णवृन्दा वनैमा (भजन संग्रह), कालैमा काले (भजन संग्रह), मा¥यो नी मायाले मा¥यो( सालैज्यू), गाजल लगाइनछ्यौ –गजल, (पुरु लम्सालद्वारा रचना गरिएको) (राजबाबु श्रेष्ठको) दुई दिनको ख्याल ख्याल होकी साँच्चैको प्यार गजल यस्तै यस्तै धेरै छन् मैले आफैंले संगीत भरेको र स्वर दिएका गीतहरु ।
गीत संगीतको क्षेत्रमा नाम छ दाम छैन भन्नेहरु पनि छन् तपाई के भन्नुहुन्छ ?
सबैभन्दा पहिलो कुरो त संगीतलाई इज्जत दिनुपर्छ । हामीले संगीतलाई इज्जत दियो भने संगीतले पनि पैसा दिन्छ । यसको अर्थ जीवनभरी संगीतलाई माया गरेको छ छैन भन्ने हो । दुई दिन संगीतमा लाग्ने त्यसपछि केही भएन भनेर छोडियो भने त्यसले न त नाम दिन्छ न दाम नै । दुई दिन संगीतको क्षेत्रमा लागेर पैसा कमाउन सकिएन भन्नु गलत हो । दीर्घकालीन रुपमा लाग्ने मान्छेले नाम पनि कमाउँछ दाम पनि कमाउँछ । अरु के गर्छन् के भन्छन् भन्दा पनि म चाहिँ दाम र नाम दुवै कमाउन सकिन्छ भन्ने सोंचको मान्छे हो ।
तपाईको सांगीतिक यात्रा कहिले पूरा होला ?
पुरा त म जहिलेसम्म यो धर्तीमा रहिरहन्छु, त्यत्तिन्जेलसम्म मेरो यात्रा पुरा हुने छैन ।
आजभोली धेरै गायकगायिका विदेशतिर पनि प्रस्तुती लिएर जाने गरेका छन् तपाईँ अहिलेसम्म कुन कुन देश जानुभयो ?
मैले नेपालका त सबै जिल्लाहरुमा पुगेर गीत गाइसकेको छु । विदेश भने म जापान र लण्डनमा मात्र पुगँे अहिलेसम्म । साथीहरुले चाहना गर्नुभएर बोलाउनु भएको खण्डमा अन्य देशहरुमा पनि जान सकिन्छ ।
तपाईले संगीत बाहेक अन्य विकल्प पनि रोज्नुभएको छ ?
संगीत बाहेक अन्य विकल्प अदृश्य छ । अहिलेसम्म त्यस्तो सोंच बनाएको छैन । तर कथाकदाचित अन्य विकल्प खोजे पनि संगीत मेरो पहिलो विषय नै रहन्छ ।
मलाई जो जति स्रोता दर्शकले संगीतकार तथा गायक थानेश्वर गौतम भनेर चिन्नुहुन्छ उहाँहरु सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । यदि कसैले थानेश्वर गौतमका गीतहरु सुन्नु भएको छैन भने पनि सुनिदिन आग्रह गर्दछु । नेपाली गीत संगीतलाई मायाँ गर्नु नै कला र संस्कृतिको संरक्षण गर्नु हो ।